Borosy alika hazo, borosy biby, fonon-tanana fanesorana volo biby - Kudi
Suzhou Kudi Trade Co., ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana fikolokoloana biby fiompy lehibe indrindra ary famonosana alika azo averina any Shina ary izahay dia nanam-pahaizana manokana momba izany nandritra ny 19 taona. Ny orinasanay dia tany Suzhou, izay antsasak'adiny ihany amin'ny lamasinina avy any amin'ny seranam-piaramanidina Shanghai Hongqiao. Manana ozinina roa izahay, izay natao indrindra ho an'ny fitaovan'ny fikolokoloana biby sy ny fatorana alika azo ahemotra, ny vozon'akanjo ary ny kilalao biby fiompy miaraka amin'ny velaran'ny famokarana 9000 metatra toradroa…
tsenan'ireo tia biby
Adidy mavesatra azo alainina alika azo alefa 1. Ny tady azo esorina dia tady kofehy malalaka. Ity famolavolana ity dia ahafahanao mihodina miverina am-pilaminana ny tady, izay afaka misoroka tsara ny fatoran'ny alika tsy mihodina sy mifatotra. Ary koa, io famolavolana io dia afaka mampitombo ny faritra misy ny hery amin'ny tady, manao izay hahatoky kokoa ny tady mahazaka, ary mahazaka hery misintona bebe kokoa, hahatonga ny fandidiana ho mora kokoa ary hitondra anao hampionona. 2.360 ° maimaim-poana tangle adidy mavesatra alika azo averina afaka ...
Fanadiovan-tena ho an'ny alika ho an'ny alika 1.Ny volon-tsolika manadio tena ho an'ny alika dia vita amin'ny vy vy, ka mateza be. 2.Ny volon'ondry miforitra tsara amin'ny borosinay dia natao mba hidirana lalina ao anaty palitao ny biby fiompinao nefa tsy hikorontana ny hoditry ny biby fiompinao. 3.Ny borosin-tsolika manadio tena ho an'ny alika dia hamela palitao malefaka sy mamiratra ihany koa ny biby fiompinao aorian'ny fampiasana azy rehefa manotra azy ireo sy manatsara ny fivezivezy. 4. Amin'ny fampiasana tsy tapaka, io borosy manadio tena io dia hampihena ...
Adidy mavesatra alika azo averina alika 1. Ny raharaha mavesatra alika azo alefa amin'ny alika dia vita amin'ny akora ABS + TPR premium, hisorohana ny famotehana ny tranga noho ny fianjerana tsy nahy. 2. Ity fantsom-panafody azo averina ity dia alaina amin'ny kasety nylon taratra izay mety mitatra hatramin'ny 5M, noho izany dia ho azo antoka kokoa rehefa miasa ny alikanao amin'ny alina. 3.The Heavy Duty Retractable Dog Leash miaraka amina hetsika lohataona mahery ho an'ny famerenana moramora, hatramin'ny 50,000 heny. Mety amin'ny alika lehibe lehibe, salantsalany ary kely kokoa ...
Mahita alika manodidina izahay ary ny sasany amin'izy ireo dia toa manana angovo tsy manam-petra, ny sasany kosa milamina kokoa. Betsaka ny ray aman-dreny miompy no miantso haingana ny alikany be herim-po ho “mahery fihetsika”, Nahoana ny alika sasany no mahery noho ny hafa? Ny toetra mampiavaka ny mpiandry ondry alemanina, ny sisintany sisin-tany, ny retrievers volamena, ny ...
Misy fihary hatsembohana ao am-pelatanan'ny alikao. Ny alika dia mamoaka hatsembohana amin'ny faritra amin'ny vatany tsy rakotra volon'ondry, toy ny orona sy ny faladian'ny tongony. Ny sosona anatiny amin'ny hoditry ny alika dia misy fihary hatsembohana - mampihena ny alika mafana. Ary toy ny olombelona, ​​rehefa alika dia mitaintain-dava na miady saina, ...
Ny tompon'ny biby fiompy rehetra dia te hahalala bebe kokoa momba ny alikany, momba ny toerana fatoriana alika tiany. Ireo toerana alain'ny alika, ary ny fotoana laniny misimisy dia afaka manambara zavatra betsaka momba ny fahatsapany. Ireto misy toerana fatoriana mahazatra ary inona no mety ho dikan'izy ireo. Eo amin'ny lafiny ...
Mifantoka sy matihanina,
Ataovy tsaratsara kokoa ny fiainantsika!
Suzhou Kudi Trade Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana fikolokoloana biby fiompy betsaka indrindra ao Shina.
Ny orinasa dia miorina ao amin'ny Wangshan Industrial Park, Distrikan'i Wuzhong, Suzhou, Sina,
izay mirefy dimy arivo metatra toradroa mahery.